Fepetra sy famaritana fitsaboana Proton - Proton California
JEREO NY FOMBA ANANANTSIKA NY FIARAHAM-PANAHY AMIN'NY OLON-DALANA SY NY fananganana TELEMEDICINA
Safidy Telemedicine Azo alaina ankehitriny
Mitady Portal Portal an'ny marary858.283.4771
Ny ati-doha sy ny hazondamosina
Fantsom-panafody sy lalan-dra
Loha sy hatoka
Miverina & Faharoa
Topimaso ny fanohanan'ny marary
Ny mpitsabo anay
Fijoroana vavao ho an'ny marary
Portal Portal an'ny marary
Proton Therapy Glossary of Terms
System Beam Fitaterana - Ny rafitra fitaterana andry dia andiana electromagnets mitarika ny andry. Ireo proton avy amin'ny siklotron dia entina any amin'ny efitrano fitsaboana tsirairay avy amin'ny fampiasana tsipika fantsona.
Ben'ny Tumors - Ny fivontosana volo dia tsy homamiadana. Matetika izy ireo dia azo esorina, ary, amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsy miverina izy ireo. Ny sela amin'ny fivontosana jinja dia tsy miparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Tampon'ny bragg - Ny fotoana anaovan'ny proton (sy ny sombin-javatra mavesatra be) ny ankamaroan'ny heriny. Rehefa mandeha mamaky ny raharaha ny proton dia very hery ary miadana tsikelikely. Alohan'ny handehanany miala sasatra dia mametraka ny tanjany farany izy ireo.
CT Scan - Ny tomography compute, fantatra ihany koa amin'ny scan CT na CAT, dia fomba tsy misy fanaintainana sy tsy manahirana hijerena ao anaty ny vatana amin'ny fampiasana sary X-ray. Mandritra ny fizahana CT dia misy sary marobe alaina amin'ny zoro isan-karazany. Ny solosaina dia manambatra ireo sary mba hamoronana sary miampita nomerika, na silaka, taolana malemy, taova, lalan-dra sy taolana. Matetika ny silaka dia azo atambatra mba hamoronana sary 3-D.
fitsaboana simika - Ny simioterapy ho an'ny homamiadana dia misy ny fampiasana zava-mahadomelina (nalaina am-bava na intravenna) hanafihana ireo sela voan'ny homamiadana, na mivantana na tsia, amin'ny tanjona hamonoana azy ireo na hampihena ny fitomboany.
Cyclotron - Ny cyclotron dia mamokatra ny andry proton mampiasa hidrôzenina sy ôksizena hamoronana renirano plasma. Ny proton dia alaina, hafaingana hatrany amin'ny 100,000 kilaometatra isan-tsegondra, ary avy eo alefa any amin'ny rafitry ny fitaterana andry. Milanja 95 taonina eo ho eo ny cyclotron.
Dosimetrist - Ny Dosimetrists dia manana fiofanana manokana amin'ny fandrefesana ny fiparitahan'ny taratra ary ny fatra ny taratra taratra taratra taratra. Ireo mpahay fizika sy dosimetrist an'ny mpiasa dia miara-miasa amin'ny mpitsabo anao amin'ny famolavolana drafitra fitsaboana. Izy ireo koa dia manara-maso ireo milina fitsaboana tara-pahazavana momba ny fandidiana sy ny maha-marina azy.
Gamma Knife - Ny radiosurgery Gamma Knife dia karazana fitsaboana amin'ny taratra ampiasaina hitsaboana ireo fivontosan'ny vay sy aretina malemy. Izy io dia naseho fa mahasoa amin'ny fitsaboana ny toe-javatra tsy misy aretina, ao anatin'izany ny fikorontanana toy ny arteriovenous malformation (AVM) sy ny neuralgia trigeminal.
Gantry - Ny efitrano fitsaboana telo an'ny California Protons Cancer Center dia misy gantry iray, izay mihodina manodidina ny marary 360 degre hamela ny fitsaboana amin'ny lafiny rehetra. Ny gantry tsirairay dia misy rihana telo ary milanja 283 taonina.
Fitaovana fametavetana - Fitaovana ampiasaina amin'ny fametrahana ny marary am-pahamendrehana sy maharitra mandritra ny fitsaboana ka milamina ny fametrahana ny marary.
Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana maoderina (IMRT) - Ny IMRT dia endrika maoderina fampiasa amin'ny radiôma 3-D izay manome alalana ny ekipa klinika hamantatra ny habetsaky ny taratra ho an'ny fivontosana raha mametra ny fatra amin'ny sela manodidina. Ny IMRT dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny prostate, ny lohany ary ny tenda ary ny fivontosana hafa akaikin'ny taova goavambe sy ny hoditra izay tsy voan'ny kansera.
Mivalona maharary - Ny fivontosan'ny valan'aretina dia homamiadana ary voan'ny sela tsy voafehy intsony. Ny sela ao amin'ireo fivontosana ireo dia afaka manafika tavy eo akaiky eo ary miparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Oncologist fitsaboana - Dokotera izay manam-pahaizana manokana amin'ny famaritana sy fitsaboana ny homamiadana. Aorian'ny fanaovana diabeta homamiadana dia anjaran'ny oncologist ny manazava ny aretina homamiadana sy ny dikan'ny dingana aretina amin'ny marary; mifanakalo hevitra momba ny safidy fitsaboana isan-karazany; manoro ny fitsaboana tsara indrindra; manome fikarakarana tsara indrindra; ary manatsara ny kalitaon'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fitsaboana mahasitrana sy ny fikolokoloana palliative miaraka amin'ny fanaintainana sy ny fitantanana soritr'aretina. Ny oncologist mpitsabo dia manoratra sy manome fitsaboana sy fitsaboana simika amin'ny rafitra rehefa voalaza.
Metastasis - Ny fiparitahan'ny homamiadana na aretina avy amin'ny taova na faritra iray amin'ny vatana mankany amin'ny iray hafa izay tsy mifandray mivantana aminy. Indraindray ny sela dia miala amin'ny toerana voan'ny homamiadana (voalohany) ary niely tamin'ny taova sy taolana hafa izay ahafahan'izy ireo manohy mitombo ary mamorona fivontosana hafa ao amin'io toerana io. Izy io dia fantatra amin'ny hoe metastasis na homamiadana faharoa.
MRI - Ny sary resonance andriamby, fantatra amin'ny anarana hoe MRI, dia fomba fanahafana tsy misy fanaintainana ampiasaina hanampiana amin'ny famaritana aretina isan-karazany. Ny scanner MRI dia mampiasa andriamby mahery, onja onjam-peo ary teknolojia solosaina hamokarana sarin'ny taova, sela malemy, taolana ary ny ankamaroan'ny rafitra ao anaty avy amin'ny lafiny rehetra, nefa tsy mampiasa taratra ionizing.
Fampandrenesana pasifika - Fomba nentim-paharazana amin'ny famoahana fitsaboana proton izay amboarina ny vatan-kazo hifanaraka amin'ny fivontosana dia eo ivelan'ny nozatra fitsaboana fotsiny.
Fanapahana volo amin'ny pensily - Ny farany amin'ny teknolojian'ny fitsaboana proton, ny fanaovana scanner ny pensilihazo dia mamela fatra marina ny fitsaboana proton hoentina any amin'ny fivontosana. Ny teknolojia dia mametra ny fiparitahan'ny taratra amin'ny sela manodidina. Ny pensilihazo dia azo ampiasaina hanasitranana fivontosana homamiadana matanjaka sy sarotra ary tsy marary amin'ny mararin'ny olon-dehibe sy ny zaza.
PET Scan - Ny Positron Emission Tomography, antsoina koa hoe scan PET, dia teknika fitarafana izay mandinika ny fiasan'ny sela amin'ny sela. Azo ampiasaina amin'ny famaritana sy fanarahana ny fivoaran'ny aretina na ny toe-javatra. Mandritra ny scan an'ny PET dia misy fanafody radioaktifa antsoina hoe tracer omena intravena. Ny karazana sela sasany - toy ny sela homamiadana - dia mety hametaveta haingana kokoa an'io akora io noho ny sela salama manodidina. Amin'ny fampiasana teknolojia fitarafana mandroso, ny scan an'ny PET dia mampiseho ireo faritra misy metabolika tsy ara-dalàna hanampiana amin'ny famaritana ny toerana niavian'ny aretina iray ao amin'ny vatana sy ny fivoarany.
Photon - Sombitry ny taratra hazavana na taratra elektromagnetika. Taratra X sy taratra gamma dia taratra fotona.
Antigen-prostate-spétrication (PSA) - Antigène Prostate-spéthit (PSA) dia proteinina novokarin'ny sela prostaty. Ny fitsapana PSA dia natao hanampiana amin'ny famaritana sy hanarahana ny homamiadan'ny prostaty amin'ny lehilahy.
Proton / Proton Radiation - Ny proton dia sombin-javatra miorina tsara hita ao amin'ny atin'ny atoma. Ny proton ampiasaina amin'ny fitsaboana proton dia avy amin'ny fanesorana atômanan'ny hidrôzenina ao amin'ny elektrônany. Ny taratra proton dia endrika iray amin'ny fitsaboana amin'ny taratra ivelany, entina amin'ny famokarana andry izay miditra amin'ny vatana avy any ivelany. Rehefa mifandray amin'ny elektrôna ao amin'ny atômin'ny sela homamiadana ny proton, dia manome angovo manimba ny ADNn'ny sela homamiadana izy ireo. Manimba ny asan'ny sela manokana izany, ao anatin'izany ny fahaizana mizara na mihanaka. Ny fahafahan'ny sela homamiadana manamboatra ratra toy izany dia mazàna ambany noho ny an'ny sela amin'ny sela mahazatra. Vokatr'izany dia maty ny sela homamiadana ary maty koa ny fivontosana.
Proton Therapy - Ny fitsaboana Proton dia karazana fitsaboana amin'ny taratra izay mampiasa protons (zana-tsokajy subatomika) fa tsy taratra X hitsaboana aretina voan'ny homamiadana sy tsy fahasalamana. Izy io dia afaka mikendry ireo fivontosana am-pahalalana tsara, mampihena ny fahasimban'ny sela sy taova akaiky eo akaiky eo ary mampihena ny risika homamiadana faharoa ateraky ny fipoahan'ny taratra.
Radiation Oncologist - Dokotera efa zatra mitsabo homamiadana amin'ny taratra ary hanome tolo-kevitra momba ny fitsaboana anao. Ny oncologists on radiology dia mitsabo aretina bitika sasany amin'ny taratra ihany koa.
Therapist Radiation - Ireo mpitsabo amin'ny taratra dia ampiofanina sy omena alalana hanaterana fitsaboana amin'ny taratra, fitantanana taratra amin'ny alàlan'ny dokotera sy fanaraha-mason'ny dokotera Izy ireo koa dia mandamina ny fandaharam-potoanan'ny marary isan'andro, manara-maso ireo marary isaky ny fitsaboana amin'ny taratra, mitazona firaketana isan'andro ary manao fanamarinana kalitao amin'ny milina taratra mba hahazoana antoka fa miasa tsara izy ireo.
FAQ fitsaboana fitsaboana Proton
Drafitra ny fitsidihanao
M – F 8 am-5pm PT
© 2021 California Hopitaly fitsaboana fitsaboana momba ny homamiadana politika fiarovana fiainan'olona Terms & Conditions
Internet Video onjam-peo Event TV Social Media Vaovao momba ny vaovao Ny marary ankehitriny na ankehitriny Fianakaviana na Namana Referralista mpitsabo Referral momba ny hopitaly Famerenan'ny fiantohana Other Ahoana no nandre ny momba anay?*
Raha misy hafa, azafady mamaritra
Adiresin'ny làlana Adiresy-dalana, 2 fihetseham-po State AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict de ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandySouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingNy tafika mitam-piadiana amerikanaNy tafika mitam-piadiana EoropaNy tafika mitam-piadiana Pacific Kaody positaly
HematologyMedical OncologyOncology pediatricOncology RadiationOncology chiropracticOnkolojiaFizìkaDosimetryOther
Ahoana no nandrenesanao ny momba an'io hetsika io?
Brochure / Postcard ao amin'ny Mail
Taratasy manokana / fanasana
Tale / Mpanolotsaina